DEG DEG:Ciidamada Soomaaliya oo Diley Hogaamiyaal Shabaab Cali Dheere Kujiro.. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeUncategorizedWararka maantaDEG DEG:Ciidamada Soomaaliya oo Diley Hogaamiyaal Shabaab Cali Dheere Kujiro..
DEG DEG:Ciidamada Soomaaliya oo Diley Hogaamiyaal Shabaab Cali Dheere Kujiro..
August 14, 2019 marqaan Wararka maanta 3
Muqdisho(Marqaannews)-Faah faahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalo saacado qaatay oo dorraad ka dhacay degaanka Shaam oo hoos-taga degmada Adheegle ee gobalka Shabeellada Hoose.
Dagaalkaan ayaa waxaa u dhaxmaray ciidamada milateriga Soomaaliya gaar ahaan guutada 14-ka Oktoobar, ururka 66aad hurintiisa 3aad ee qaabilsan sahanka iyo gaaf-wareegga islamarkaana u tababaran sida kumaandooska Soomaaliya.
Militariga dowladda ayaa sheegay in ugu yaraan 17 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dhinteen howl-galka, islamarkaana ay ku dhaawacmeen xubno uu kamid yahay Sheekh Cali Maxamuud Raage “Sheekh Cali Dheere” oo ah af-hayeenka Al-Shabaab.
Warka dhaawaca Cali Dheere ayaa waxaa shaaciyey idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee SNA Radio.
Idaacadda ayaa sidoo kale sheegtay in dhawaaca Cali Dheere uu yahay mid culus, islamarkaana lagu hayo degaan hoosyimaado Degmada Kuntuwaareey Ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Ma jirto cid si madax banaan u xaqiijin karta sheegashada ciidamada qalabka sida ee dhaawaca Cali Dheere. Sidoo kale, kooxda Al-Shabaab ayaan wax war ah kasoo saarin arrintan.
Sida ay wararku sheegayaa Al-Shabaab ayaa ka war helay dagaal xoog leh oo loo adeegsaday hub culus iyagoo galbaniyay kolonyo gaadiid ah uu la socda af-hayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere waxaana la sheegayaa in aysan Al-Shabaab ciidamada dowladda ku ogeyn degaanka oo loo galay wado ku taala.
DAAWO VIDEO :XOG Cawaale Adan Hargeysa Wuxusan Filayn,Muuse Biixi Iyo Kulanki Bayle
WAR CUSUB:Kuuriyada Waqooyi oo Maraakiib Dagaal Usoo Dirtay Badi Kenya Soomaaliya Kula Muran Sanayd,Si’Ay Soomaaliya u Caawiyaan
Dhawr jeer oo hore baa la yiri Cali-Dheere waa la dilay iyo waa la dhaawacay.Been bayna wada noqdeen.Tan hadda la leeyahay Cali-Dheere waa la dilay ama waa la dhaawacay wali ma hayno xaqiiqada dhabtaa.
Baxsey baxsey ,la qabay baa xigta. kaasi dhibaata badan ayuu ka geystey Somaliya. walib shacab aan waxba galabsan, gaari in lagu xiro ayuu istaahilaa,ilaa uu cad cad u goo go. waa munaafaq, nacasnimadana wuu kaga daray oo wax walba isagaa qirta.
Cid u ooyda helimaayo waa dameer bakhtiyay oo kale.
Dhimashadu haday ku daba joogto, marka danbe way ku haleeshaa.
Ninkani meel uu ku noqdana ma hayo, meel uu joogana ma hayo, waa calaamaadkii ahaa dhulku ku diid cirku ku diid.